ABO fi Mooraa Qabsoo Oromoo Humneesuu Laalichisee Iyyannaa Gara Ummata Oromoo Maratti - Bilisummaa
Posted by: Boonaa Dagaa June 29, 2013
About Boonaa Dagaa Previous: OPride lauches Oromo Week Social Media Campaign
Next: Akkaan yoo mirriysan malee
4 comments qanqure June 30, 2013 at 8:01 am Kijiba dhisaa! warri arcaatun kun oloola keessan isa waggaa sadii dura dhabatee ture akka harawwati eegaltanii?
Reply sanyii June 30, 2013 at 10:21 am nama dhamma ABO yeroo kamu caalaa jabaacha jira wantii ta’eef hin dhaamina Abba Caalaa Laata Waxabajjii 28 fi 29 walghii miseensoota fi walgahii ummata irraa ture akkasumas miseensa ABO biyyaa alaa jiratu guyyaa kabaja SBO waxabajjii 15 ,2013 qooda fudhachun filmii WBO ummata walgahii Awuurrooppaa irraa qooda fudhachata turan ragaa wanii tureef kijibaa fi namoota moora qabsoo bilisummaa oromoo gudachuu isaati garaan gubatte kanaafuu itti hin milkoftani abshir
Reply no June 30, 2013 at 6:12 pm Ayyaantu, Dubbiin akka kanaan maqaa namootaa xureessu kana dura yeroo adda addaatti Bilisummaa.com irratti ba’a. kun ammo akka nammi mana sana bane hin ilaalle godhe malee bu’aa hin argamsiisneef an akka nam tokkootti ergasii Bilisummaa.com bane hin ilaalle. malliis Midia sobduu wan ta’eefii irra deddebi’ee waan sobaa waan oromoo diigu qabsoo Oromoo xiqqeessu waan barreessuuf kanaaf isin mee waan akkasii irraa yoo of qusattan hin badu. dhiifama gaafachuun keessan waan guddaadha.
Reply lojee July 1, 2013 at 7:08 am Bilisummaan yoo dhugumaan guddina qabsoo oromoo hawwa ta’e akkuma ayyaantu.com saba oromoo dhifama gaafachuun olola maxxanes haqee bilchina qabu mirkaneessuu qaba. Yoo akkas hin goone garuu iyyaa gogaa hoolaa uffatee gola hoolotaa seene tahuu ammas irra deebi’ee mirkaneessaa jira. Oromoon ammoo olola bubuutuu namoota harcaatuun afuufamtuun hin gowwomuutii kan amaarti wuhaa biweqxuu inboci jettu sana ta’uurraa darbanii miidhaan qabsoo oromoorraan gahan tokkollee hin jiru. Addi bilisummaa oromoo kan yoomiituu caalaa har’a milkiitti jira. Abdii, bultumiifi abbaan caalaa dirqama qabsootti jiru, kanaaf ammo abo ibsa kennuuf hin dirqamu. Warri dubbii ololaan asbahan kunis akka abon bobbaa akkasiifi bakka akkasii jira jedhee miseensa iaa diinaaf saaxilu warra hawwaniifi diinaaf ergamntu tooftaan dubbii afaanii nu fedha. Barri akkasii yaa darbeetii abjuu keessan keessaa dammaqaa.